Sawirro: Magaalada garoowe ee xarunta Maamulka Puntland oo shacab iyo mas’uuliyiin ay meel ku wada ciideen – Kismaayo24 News Agency
Madaxweyne Ku-xigeenka Maamulka Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdullahi Cumar Camey ayaa salaadda ciiddul adxaha la oogey shacabka caasimadda Garoowe.
Salaadda ciiddul adxaha oo lagu tukadey garoonka kubadda cagta Mire Awaare ee magaalada garoowe ayaa waxaa Madaxweynaha halkaasi kula tukadey salaadda muuliyiin ka tirsan goleyaasha Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland, isimo, waxgarad, siyaasiyiin iyo shacab weynaha magaalada Garoowe.
Kusimaah Madaxweynaha Eng. Camey ayaa ugu horayn hambalyo ku aadan farxadda munaasibadda ciiddul adxaha u diray ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan iyo guuda ahaanba shacabka reer Puntland, waxaana uu sigaara ula qaybsaday dareenka farxadda ciiddull adxaha ciidanka qalabka sida ee Puntland, isagoona xusay inay suura geliyeen amniga, kala danbaynta iyo xasiloonida Puntland.
Sidoo kale Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland ayaa caadeeyey in maanta Puntland uu ka socdo kana hirgalay horumar lixaadle oo aanay jirin meel uu ka hirgay Soomaaliya, taasina ay suura geliyeen isku duubnida shacabka iyo Maamulka Puntland.
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland ayaa xaqiijiyey in isaga aanay ka iman amar lagu joojinayo lacagta shillin Soomaaliga ah, hase yeeshee ay jirto digreeto Madaxweynaha Puntland soo saaray, taas oo lagu socodsiinaayo qaadashada lacagtaasi, laguna mamnuucayo lacagta xoosh ka ah amaba duugowdey ee lagu soo daabulayo gawaadhida xamuulka, lagana keenayo gobolada koonfureed ee Soomaaliya, waxaana uu Madaxweyne camey xaqiiyeyn digreetada Madaxweynaha Puntland soo saaray ay tahay mid saxa oo u dan ah Maamulka Puntland iyo shacabkeeda.
Ugu danbayntii, Madaxweyne Ku-xigeenka Maamulka Puntland Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey ayaa ugu baaqay ganacsatada reer Puntland, shaqaalaha iyo masuuliyiinta sar-sare ee dawladda inay iyagu ugu horeeyaan qaadashada lacagta Shillin Soomaaliga, waxaana uu sidoo kale ugu baaqay Dawladda Fadaraalka Soomaaliya inay soo faragashato wax ka qabashada dhibtaatada ka taagan lacagta ummadda Soomaaliyeed ee Shillin Soomaaliga ee laga keenayo gobolada koonfureed ee Soomaaliya.
Soomalia oo Halis weyn ay kusoo wajahantahay iyo Beesha Caalamka oo loogu baaqay in la xiro Saldhigyada Imaaraadka Carabta
Akhriso: Maxaad ka taqaan taariikhda Xuseen Macalin Maxamuud oo farmaajo uu ka dhigay Xuseen Macalin Maxamuud?
Madaxweyne Xasana oo wadanka Jordan uga qayb galay kulan loga hadlaayo…